Ny risika ara-pahasalamana ateraky ny mamy artifisialy | Bezzia
Ny risika ara-pahasalamana ateraky ny mamy artifisialy
Tony Torres | 10/05/2022 20:00 | sakafo
Azo antoka fa imbetsaka ianao no nandre fa tsy mahasalama ny mamy artifisialy. Satria efa ela no nisy resaka ny voka-dratsy aterak'ireo vokatra ara-pahasalamana ireo. Na izany aza, eo ambanin'ny fiheverana fa ny saccharin dia tsara kokoa noho ny siramamy, dia mitohy ny fihinanana azy tsy misy fiheverana ny tsy fahampian'ity vokatra mahazatra ity.
Amin'izao fotoana izao izay karakaraina tsara ny sakafo, izay mihamaro ny olona mianatra mamaky sy mamadika ny etikety vokatra mba hanary ny tena manimba, maninona raha mianatra sy mahita bebe kokoa momba ny loza ateraky ny akora izay mety ho toa a priori. tsy mampidi-doza? Raha anisan'ireo misotro kafe sy infusions misy mamy ianao, manasa anao izahay hahita ny loza ateraky ny fihinanana azy.
1 Mampidi-doza ho an'ny fahasalamana ve ny mamy?
1.1 Ahoana ny fanoloana siramamy amin'ny fomba mahasalama
Mampidi-doza ho an'ny fahasalamana ve ny mamy?
Araka ny fanadihadiana natao dia mitohy ny fihinanana mamy artifisialy dia mety hanimba ny bakteria tsinay salama izay ananantsika ao amin'ny vatana. Ireo bakteria ireo dia ampahany amin'ny microbiota intestinal ary manana anjara toerana amin'ny fampandehanana ny vatana. Rehefa misy zavatra manelingelina azy ireo dia mety harary ny bakteria salama ary mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamana.
Izany no mamaritra ny fandalinana momba ny fihinanana mamy artifisialy. Amin'ny ankapobeny, afaka manova karazana bakteria roa karazana izy ireo, E-coli sy E-faecalis. Toa ny singa amin'ny mamy artifisialy sasany afaka manova ny habetsaky ny bakteria voalaza na mamokatra karazana hafa izay afaka manova ny firafitry ny zavaboary voajanahary ao amin'ny tsinay microbiota.
Vokatr'izany, ireo bakteria ireo dia mety hanimba ny rindrin'ny tsinainy, mandalo ao ary tonga any amin'ny lalan-drà. Ireo bakteria marary ireo dia afaka mipetraka sy miangona amin'ny faritra toy ny lymph node, spleen na aty ary mety hampidi-doza be ny vokany. Anisan'ny olana hafa, mety hitranga ny karazana otrikaretina rehetra, anisan'izany ny septicemia mampidi-doza indrindra.
Ahoana ny fanoloana siramamy amin'ny fomba mahasalama
Rehefa mampiasa mamy artifisialy ianao dia satria te hampihena ny fihinanao siramamy. Na ao anatin'ny sakafo manify na amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Efa fantatra izy ireo ny loza ateraky ny siramamy sy ny fiankinan-doha aminy, nefa manomboka tsikelikely fantaro ny loza ateraky ny vokatra artifisialy toy ny mamy. Noho izany dia tsara kokoa ny mitady fomba hafa hanamafisana ny sakafo miaraka amin'ny vokatra tsy mampidi-doza ho an'ny fahasalamana.
Ohatra iray amin'ny siramamy voajanahary ny daty. Voankazo misy siramamy voajanahary be dia be izay tonga lafatra ho an'ny mamy tsindrin-tsakafo sy zava-mamy vita an-trano tsy mampiasa siramamy. Ny tsy fahampian'ny daty dia ny habetsahan'ny siramamy ao aminy dia mahatonga azy ireo ho sakafo be kaloria. Koa raha mitady hampihena lanja ianao dia tokony hohanina amin'ny antonony.
Mba hanamafisana kafe na infusions dia azonao ampiasaina ny mamy voajanahary tsara indrindra, toy ny tantely na sirop agave. Na dia tena caloric ihany koa izy ireo, toy ny kely dia kely dia ampy mamy Ny vera dia tsy tokony hanana olana be loatra, raha tsy mihoatra ny fandaniana. Raha ny zava-mamy artifisialy kosa dia tsy mitovy ny loza.
Anisan'ny safidy tsara indrindra ny stevia izay avy amin'ny zavamaniry, ka voajanahary, na erythritol. Ity mamy voajanahary ity dia avy amin'ny sakafo maro toy ny katsaka na holatra, ankoatra ny hafa. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny safidy tsara indrindra dia ny mifidy mamy voajanahary foana mba hisorohana ny zavatra simika manimba ny fahasalamana.
Farany, tadidio fa ny siramamy dia tsy inona fa akora ampiasaina hanafenana ny tsiron'ny sakafo. Mianara mankafy ny tsiro voajanahary amin'ny vokatra izay matetika miafina eo anelanelan'ny siramamy sy siramamy be dia be ho hitanao fa zatra tsikelikely ny lanilanao azy ireo. Tsy ho ela dia hankafy tsiron-tsakafo maro kokoa ianao ary miaraka amin'izany dia afaka mihinana sakafo mahasalama ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » sakafo » Ny risika ara-pahasalamana ateraky ny mamy artifisialy
Inona no toetra ananan’ny mpivady tsy sambatra?
Bolgara squats sy ny tombony